Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa hogaaminayo wafdiga kusii jeeda Kismaayo, halkaasi oo lagu wado inay wadahadallo ku saabsan xal-u-helidda Khilaafka Siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada.
Cabdi Xaashi ayaa sheegay in safarkooda Kismaayo uu qeyb ka yahay dedaallada mudo dheer uu soo wadey Aqalka Sare ee lagu dhex-dhexaadinayo Villa Somalia iyo dowlad goboleedyada, taasoo hadda heer gaba-gabo ah mareysa.
Guddiga Gaarka ahaa ee Aqalka Sare Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa soo saaray Warbixin iyo goa'an ku saabsab khilaafka dowladda Federaalka ah iyo Dowladaha xubnaha ka ah 27-kii November.
Waxuu Guddiga ugu baaqey Xukuumadda inay fuliso go'aanka uu soo saarey oo xambaarsan tabashooyinka maamul goboleedyada, oo ay soo aruuriyeen Guddiyadii Aqalka Sare uu u diray Caasimadaha dowlad goboleedyada.
Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa magacaabey 22-kii October guddi 4 wasiir ka kooban, oo Aqalka Sare kala shaqeynayo xal u raadinta tabashooyinka Maamullada iyo soo afjarida Khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira.
Dhex-dhexaadinta Aqalka Sare ayaa kusoo beegmaaysa xilli isbedello ay ka dhacayaan maamul goboleedyada, oo Madaxda qaar uu waqtigooda xil heynta uu dhamaadey, sidoo kale uu is-casilay Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Shariif Xasan.
Khilaafka dowladda Federaalka iyo maamullada aaa gaarey heerkii ugu sareysay iyadoo...
Soomaliya 09.12.2018. 11:02